Tag: khiyaano | Martech Zone
Isniin, April 24, 2017 Tuesday, April 25, 2017 Robert Glazer
Warshadaha kuxiran waa la nuugay. Waxaa jira ciyaartoy badan, lakabyo, iyo qaybo dhaqaaqa. In kasta oo qaar ka mid ah nuyuusyadan ay yihiin waxa ka dhigaya qaabka ku-xirnaanta mid gaar ah oo qiimo leh, sida isku xirka magdhawga natiijooyinka, waxaa jira kuwo kale oo aan aad loo jeclayn. Waxa intaa dheer ayaa ah, haddii shirkad aysan ka warqabin iyaga, waxay halis ugu jiraan inay waxyeeleeyaan sumadooda. Shirkaduhu inay si buuxda uga faa'iideystaan ​​fursadda oo ay dib ugu soo laabtaan maalgashiga in barnaamij gacansaar ah uu awood u leeyahay
Sida looga Hortago Khayaanada Tartankaaga Xiga ee Soo Socda
Talaado, Juun 21, 2016 Douglas Karr
Waxaan bilaabi doonnaa kii ugu horreeyay ee tartamo badan goor dhow si aan u soo jiidanno dad badan oo soo booqda wargeysyada emaylkeena. In kasta oo aan haysanno ilo ballaaran oo horumarineed, ma jirto hab aan ku horumarin karno tartanka nafteenna. Waxaan u adeegsan doonnaa Hellowave, oo ah tartan bixiye khadka tooska ah. Sababta Sababta koowaad: Khayaanada Waxaan noqon doonaa mid daacad ah oo gebi ahaanba qiraya inaan khiyaanay tartan khadka tooska ah ah. Sannado kahor, waxaan qabanay tartan baraha bulshada ee gobolka si aan u helno